WARAYSIGA XIDDIGAHA Login
Current Articles Archives Search WARAYSIGA XIDDIGAHA
Written by webmaster at 1:30 PM on Tuesday, May 06, 2008 Tweet
Bogga baadi goobka Taariikhda xidigaha waxaan maanta ku soo qaadan doonaa mid ka mid ah legends-ka ama laacibiintii magaca wayn ku lahayd cayaarta kubadda kolayga kaas oo magaciisu yahay
Axmed Muuse Huseyn oo u cayaari jiray naadigii kooxda kubadda kolayga Batroolka iyo Qarankii Soomaaliyeed. Axmed Muuse waxaan ku tilmaami karaa in uu ka mid ahaa ciyaartooyda fara kutiriska ahayd ee magaca wayn ku yeeshay taariikhda cayaarta kubadda kolayga Soomaaliyeed.
Axmed Muuse wuxuu ku dhashay degmada Xamar jajab ee gobolka Banaadrir 30kii August 1958-dii, balse markuu gaaray 10 jir, waxaa reerkiisii u soo guureen degmadda H/wadaag oo uu ku soo barbaaray kuna noolaa ilaa uu dalka ka soo tago sanadkii 1985.
Axmed Muuse, marka hore soo dhawoow, waadna ku mahadsan tahay, safarka dheer aad noo soo gashay. Hadaan su'aashayda ku biloowdo: goorma, ayaad billowday ciyaaraha ? Yaase kugu dhiirrigaliyay?
Axmed Muuse oo ka hadlaya fikirkiisa
Ahmed Muse: Intaanan guda galin Jawaabta suaashaada, waxaan rabaa in aan idinkaaga mahad celiyo gogosha soo dhawaynta leh ee aad ii fidiseen, hadaad tihiin bahda kubadda.com iyo sida daacada ah ee aad isugu ixtiraamteen in aad u adeegtaan kobcinta Isboortiga dalkiina hooyo. Waxaana hubaa in aad baaldahab ah kaga jirtaan magaca Qaranka Soomaaliyeed, taariikhda ayaana idin xusi doonto mar uun. Hadaan u soo laabto Jawaabta su'aashaadii, waxaan bilaabay cayaaraha 1972, oo aan ku bilaabay xaafadda H/wadaag, waxaana igu dhiiri geliyay dhowr qofood oo aan runtii kala dhicin sida C/qaadir Ahmed Guuleed (John), C/salaam Muuse Galaal, Ilkacase iyo Santuur oo dhamaantood ahaa cayaar yahanadii ka soo baxay xaafadda Howlwadaag.
Ma ka qayb-gashay tartammadii ciyaaraha degmooyinka ama gobollada ? oo aan oran karo qaasatan kuwa gobollada waxay ahaayeen kuwo ka xammaasad badnaa tartammadii ciyaaraha heerka 1aad. Sanadkeese u ciyaartay?
Naadigii Batroolka sanadkii 1979. Ka biloow sare bidix: Bashiir Fox, Ahmed Muuse, Aadan Abdi Maxamed Qardhaas, Xuseen kala Jaban, Gaalkacyo (Ex Boxer), Saciid Faarax iyo Macalin Ibrahin Bruuko. Fadhiga ka biloow bidix: C/risaaq fareey, Cusmaan Buruno, Cawke, Cabdicasiis (Shukri) Iyo Ciise faragaab
Goorma ayaad ku biirtay ciyaaryahannada heerka qaran ee kubbadda kolayga ?
Qarankii Kubadda Kolayga 1981 ka biloow sare bidix: Dhame, Bashiir Fox, Shiimad, Qardhaas, Ahmed Muuse, Cabdalla Cali Cumar, Awees Daahiye iyo Maxamed Sheikh (holoqsane). Fadhiga ka biloow bidix: Ali Gureey, Nuuradiin, Baarajab, Abuukar Shiino iyo Axmed Daahir.
Cayaartii finalka kooxda Qaranka Somaliya 1979 ka biloow bidix istaaga: Abuukar shiino,Arthur Duran, Ahmed Daahir, Ahmed Muse, Xasan Wacdi, Xasan Macalin, Nuuradiin, Ahmed Saciid, C/rashiid balaastiko iyo Bashiir Fox. Fadhiga ka biloow bidix: macalin Anderyaano, Awees Daahiye, Cadaawe dheere, Afwayne, Ibraahin Xasan Santuur iyo Warsame dheere
kulanadii All african games ee lagu qabtay Muqdisho 1981
Ma xusuusan kartaa guuldarradii Kuugu xumayd ee ku soo martay intii aad ku dhex jirtay ciyaaraha kubbadda kolayga ?
Kooxdii Qaranka oo la tashi siinayo macalinkii Arthur Duran
Qaranka Somaliyeed markii ay qaadeen koobkii Jaamacada carabta 1979 oo uu Ahmed Muse Shabaqa jarayo
Biladihii uu ku guulaystay labadii kulan ee kala ahaa Horiyaalada Afrika 1981 iyo kii Carabta ee 1979
Ciyaaryahannadee ugu jeclayd inay garbahaaga buuxiyaan markaad u ciyaaraysay kooxdaada iyo xulka qarankaba ?
Cayaarihii Jaamacada Carabta SOM Vs IRAQ oo lagu qabtay dalka Soomaaliya sanadii 1979-kii
Ka biloow bidix: Ahmed Muuse, Baarajab iyo Bashiir Fox
Ahmed Muse oo riboonka kula boodayo laacib reer Ciraaq ah
Ma jireen cayaartooy xiligaadii ama kaa horeeyay oo aad cayaar wanaagiisa jeclayd ama aad jeclaan jirtay in aad ayagoo kale noqoto ?
Ahmed Muse: Horta ma jirin qof aan jeclaa in aan asagoo kale noqdo, haday noqon lahayd dalka ama dibadiisaba (internationally), balse sanadihii danbe waxaan jeclaa daawashada NBA-da oo aan jeclaa cayaar wanaagiisa sida Dr. J (Julius Erving) oo u cayaari jiray Philadelphia 76ers. Muddadii aad joogtay dalka Soomaaliya iyo haatan oo aad dibadda joogto, ma jiraan kooxo aad soo laylisay?
Naadina waxaan macalin u noqday kooxdii wiilasha Batroolka sanadii 1982 Naadina waxaan macalin u noqday kooxdii gabdhaha Sancada sanadii 1985 Gobolka waxaan macalin u ahaa Gobolka Sanaag sanadii 1985 Qarankana sanadii 1983 gabdhaha Qaranka
macalin Ahmed Muuse & Cabdi Xalwo cayaarihii Gobolada ee Gobolka Sanaag 1985
Goormaad ka fadhiisatay, maaxdse sababay ka fadhiisiga cayaaraha adigoo weli da'yaraa ?
Ahmed Muuse: 1982 cayaartii finalka horiyaalka ee aan la cayaarnay kooxda Jeenyo oo xiligaa ahayd koox aad u adag ayaan cayaartaas ka hor waxaan ahaa dhaawac balse aynan iga maarmin kooxdayda, kuna dheelay anoo dhaawac ah.
Funaanada Lambarka 4aad oo uu xiran jiray Ahmed Muuse
Sidee bay ahayd ayaad isleedahay aqoonta tababarayaasha iyo garsoorayaashii Soomaaliyeed ?
Sidee baad is leedahay waa lagu horumarin karaa Isboortiga Soomaaliyeed noocuu doono ha ahaadee ?
Ugu dambayn maadaama aad ahayd ciyaartooy qiimo ku lahaa kooxdiisa ama Qaranka Soomaaliyeed muddo dheerna ku soo dhex jiray ciyaaraha, Maxaad talo ahaan ugu soo jeedinaysaa dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku hawlan Isboortiga noocyadiisa kala duwan, dalka gudihiisa ama dibidiisa midba ?
Maxaad hada qabataa ma jiraan kooxo aad taba barto ?
Waxaanan hada ka mid ahay xisbiga lagu magacaabo Green ee dalka Germany ka dhisan. barlamaanka ayaan u ahay qofka u qaabilsan qaybta ajnabiga magaalada aan ku noolahay ee Troisdorf. Doorashadaas oo ay ka soo qayb galaan dad kor u dhaafay kumanaan qof lagana rabo 25 xubnood oo baarlamaanka u metesho Kaasoo shantii sanaba mar laga doorto, Waxaana si qaas ah ugu xil saran-nahay ka ilaalinta da'yarta fallalka xun xun (Youth Development).
Ahmed Muuse iyo maamulka Jarmalka ee uu ka tirsan yahay
Qaar ka mid ah madaxda ururka SSIFO ka biloow bidix: Macalin John, Axmed Muuse, Shiino Gohaad iyo Cusmaan Shiis
Faarax Oday, Qardaas, Axmed Muuse, Daa'uud Dheere iyo Cumar Ganjab
Aadan Abdi Maxamed Qardaas iyo Ahmed Muuse oo shahaado sharaf siinayo Baaba Nuur Xuseyn Alaaya raxma
Waxaa waraystay: Mohamed Sheikh Abdi (weli) Xarunta Kubadda.com - London 15894 Views :: 230 Comments :: :: Sports News, Basketball